आन्द्राभित्र आन्द्रा छिर्ने समस्या, कसरी हुन्छ उपचार ? | mulkhabar.com
January 28, 2018 | 11:14 am 198 Hits
डा. सुमनविक्रम अधिकारी/
आन्द्राभित्र आन्द्रा छिर्ने समस्या सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । धेरैलाई यस्तो समस्या पनि हुन्छ र भन्ने लाग्न सक्ला । तर यो एउटा इमर्जेन्सी समस्या हो । जसको समयमै उपचार भएन भने ज्यान समेत जाने खतरा हुन्छ । यस्तो समस्या खासगरी ६ महिनादेखि ६ वर्षका बच्चामा देखिन्छ । त्यसमध्ये ८० प्रतिशत चाहिँ २ वर्षभन्दा मुनिका बच्चामा हुनेगर्छ। आन्द्राभित्र आन्द्रा छिर्ने समस्या स्वस्थ र हृष्टपुष्ट बच्चाहरुलाई हुनेगर्छ।
यस्तो समस्या पर्दा हाँसखेल गरिरहेका बच्चा एक्कासी पेट दुखाइका कारण रुने र घोप्टो परेर बस्ने गर्छन् । फेरि एकैछिनमा दुखाइ कम भए हुन्छ र बच्चा पुनः सामान्य अवस्थामा जस्तै खेल्न थाल्छ । तर, दुखाइ फेरि सुरु भएर बच्चाले बान्ता गर्ने, रगत मिसिएको दिसा गर्ने र पेटमा गाँठो वा डल्लो भेटिने लक्षण देखिन्छ। कहिलेकाहीँ अरु नै कारणले पेटको अल्ट्रासाउन्ड गर्दा यो रोग पत्ता लाग्नेगर्छ।
शल्यक्रिया गर्दा भित्र छिरेको आन्द्रालाई बाहिर निकाल्ने वा कुहिएको आन्द्रा छ भने त्यसलाई काटेर सामान्य आन्द्रा जोड्नुपर्ने हुन सक्छ । रोग पत्ता लाग्नासाथ उपचार ग¥यो भने निको हुने सम्भावना प्रवल रहन्छ । यस्तै, यसको जोखिमबाट बच्चालाई जोगाउन सकिन्छ। – स्वास्थ्यखबर
काठमाडौं, माघ– नेपालका वरिष्ठ चिकित्सक डा सन्दुक रुइतलाई भारतले प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कारबाट सम्मानित गरेको छ । नेपाली आँखा चिकित्सक डा…